GNOME dia miresaka amintsika amin'ity herinandro ity misy zava-baovao vitsivitsy miaraka amin'ny libadwaita | ubunlog
Ny GNOME dia milaza amintsika amin'ity herinandro ity momba ny vaovao vitsy, saika ny zava-drehetra mifandraika amin'ny libadwaita
Amin'ny faran'ny herinandro dia samy GNOME amin'ny maha KDE azy ireo dia milaza amintsika ny zavatra nataony tao anatin'ny 7 andro farany, na vaovao momba izay ho avy. Ny GNOME dia manao izany amin'ny fombany manokana, ary ny KDE amin'ny fombany, izay midika fa ny iray dia miresaka momba ny kely kokoa, fa indrindra indrindra, toy ny herinandro lasa, ary ny iray hafa dia milaza amintsika bebe kokoa, nefa koa milaza zavatra ho avy tsy ho ela. Omaly, ny tetikasa ao ambadiky ny desktop be mpampiasa indrindra amin'ny Linux dia namoaka naoty iray, fa heveriko fa nopotehin'izy ireo ny firaketana ho fohy indrindra.
Raha ny marina, raha tsy diso ny kaonty, dia nisy fiovana 5 teo ho eo taminay, ary ny 4 amin'izy ireo dia mifandraika amin'ny libadwaita. Ny fahadimy dia iray amin'ireo tetikasan'ny antoko fahatelo, iray akaikin'ny GNOME, saingy tsy niditra tao amin'ny faribolana (Circle). Na izany aza, tsy afaka nijanona ny famoahana ity lahatsoratra ity izahay, ary avy eo ianao izay nitranga tamin’ny herinandro nanomboka ny 1 ka hatramin’ny 8 aprily amin'ny GNOME.
Fanovana sasany amin'ny AdwToast: Nampiana fomba hametrahana widget manokana ho lohateny, ary koa mpanamboatra adw_toast_new_format() mora ampiasaina.
Nohavaozina ny styling AdwTabBar. Izay kiheba nofantenana dia tokony hiharihary kokoa ankehitriny, indrindra amin'ny variana maizina na tsy misy tabilao 2 misokatra fotsiny.
Nampiana fananana marika fampiasana amin'ny AdwPreferencesRow. Teo aloha, ny kilasy toa an'i AdwActionRow dia nitondra ny soatoavina ho an'ny lohateny sy dikanteny ho marika Pango. Ny fananana vaovao dia azo ampiasaina hanesorana io fihetsika io. Tena ilaina izany raha azo avy amin'ny data/input ivelany ny soatoavina.
Ho an'ny AdwComboRow dia FALSE ny sandan'ny fampiasana marika. Izany dia satria ny orinasa amin'ny alàlan'ny default dia tsy manantena ny marika Pango. Noho izany, tsy mifanaraka amin'ny fitondran-tena dikanteny taloha izay mandika ny dikanteny ho marika Pango ny fananana fampiasana-dikarika.
uhttpmock dia nafindra tany Meson. uhttpmock dia tranomboky hanamora ny fitsirihana ny mpanjifa ny HTTP/REST API an-tserasera.
Ary izany dia tamin'ity herinandro ity tao amin'ny GNOME. Manantena izahay fa hiresaka fanovana bebe kokoa amin'ny herinandro ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » GNOME » Ny GNOME dia milaza amintsika amin'ity herinandro ity momba ny vaovao vitsy, saika ny zava-drehetra mifandraika amin'ny libadwaita
KDE dia nanomboka ny tetezamita tamin'ny alàlan'ny fanovana rafitra loko, anisan'ny vaovao tamin'ity herinandro ity
Lutris 0.5.10 Tonga miaraka amin'ny fanohanan'ny Steam Deck, Fanatsarana ary maro hafa